komalprd | A fine WordPress.com site komalprd – A fine WordPress.com site
प्यारो थियो सुन्दर बाल्यकाल ।
June 7, 2018 komalprd Leaveacomment
इलाम मेरो घर तोरिबारी,
सुरम्य चारैतिर बाँसघारी ।
(घेरेर बस्छन् जहिल्यै पहाड,)
वसन्तमा कोकिलको कमाल,
म भन्दथें छैन पिता समान-
बलिष्ठ अग्लो र सुरो जवान ।
आएन कैल्यै झुट, छद्म जाल,
गुच्चा तथा डन्डिबियो र घ्वाइँ
खेल्थ्यें सुरेली म खुबै रमाई ।
पठाउँथ्यो शीतलता हिमाल,
लाग्थ्यो मलाई सम लोष्ठ-स्वर्ण,
हुन्थें म आना जतिमा प्रसन्न ।
कुडिन्नथ्यो यो मन-सत्तिसाल,
रुन्थें म, तत्काल खितित्त हाँस्थें,
टाँकी तथा गोगन घाँस छ्याँस्थें ।
खान्थें मीठो ओलन, भात-दाल,
म बाल-नेता, तर स्वार्थ लेश,
एकै थियो बाहिर-भित्र वेश ।
संझन्छु, यो चित्त थियो विशाल,
कविता, लेख, व्यङ्ग्य कविता, समालाेचना, Literature, Uncategorized
अाैद्भिदीय उद्यान, पिपल, तुलसी र म
June 3, 2018 komalprd Leaveacomment
मास कार्तिकको तीस गते, बार थियो बुध,
उद्यान वाटिका हेर्ने जुरेछ दिन त्यो शुभ ।
छोरी पुण्यप्रभा, ज्वाइँ गोपी कट्टेल साथमा
वासिङ्टन गयाैं हामी बोकी कलम हातमा ।
सारा आवहवा शीत थियो उद्यान बाहिर,
जब भित्र पस्याैं हामी शीत भाग्यो कतातिर ।
शीतोष्ण एकता सोही उद्यानभित्र झल्कियो,
यो देखेपछि नेपाल-भित्रको दल टल्कियो ।
आङ्लमा यसको नाम बोटानिकल गार्डन
भन्छन् जिब्रो बटारेर बाैठनीखल गाडन ।
विशाल गृह-उद्यान अति नै छ व्यवस्थित
धेरै दुर्लभ वृक्षादि रोपिएका यतस्तत ।
यो वासिङ्टनको शोच सयाैं वर्ष अगाडिको
उद्यान स्थापना वर्ष अठारसय वीस हो ।
विभिन्न जातका धेरै वनस्पतिहरू यहाँ,
एउटै घरमा बस्छन् झगडा नगरी जहाँ ।
प्रजाति कति छन् भन्ने जिज्ञासा यसले लियो
त्यहाँ फलकमा साठी हजार अङ्क देखियो ।
उल्लेख्य वाटिका केही नामाङ्कन म गर्दछु,
थोरै भए पनि ज्ञान दिन्छ होला म ठान्दछु ।
वानस्पतिक उद्यान मुख्य उद्यान हो यहाँ,
जल, पर्जन्य उद्यान, पाक उद्यान छन् जहाँ ।
पतङ्ग-पुष्प उद्यान त्यसमै छ समाहित
विश्व-यात्रिकलाई नै यसले पार्छ मोहित ।
यहाँ विभिन्न उद्यान शिक्षाका कक्ष भेटिए,
अनुसन्धानका लागि सन्दर्भ स्रोत देखिए ।
हजाराैं अनुसन्धाता अनुसन्धान खातिर
आउँदा, व्यस्त देखिन्छ यो उद्यान निरन्तर ।
संरोपित त्यहाँ धेरै नेपालीय वनस्पति,
देखेर चित्त यो मेरो आनन्दित भयो अति ।
हेर्दै जाँदा त्यहाँ देखें नेपाली वर-पिप्पल
झुकाई शिर ढोगेंछु जोडी आफ्ना दुवै कर ।
एकै साथ थिएनन् ती पवित्र वर-पिप्पल-
मनमा खुल्दुली जागी सोधियो, किन बेगल !
पातमा आँसु राखेर तल थोपा चुहाउँदै
भन्न थालिन् पिप्पलले व्यथा-गाथा सुनाउँदै ।
नेपालमा सँगै हाम्रो, चाैतारीमा थियो घर,
बस्तथ्याैं कुम जोडेर काम अासक्ति बेगर ।
हाम्रो पवित्रता देखी प्रत्येक शनिवासर,
पुज्दथे गाउँले अार्इ हामीलार्इ सधैंभर ।
प्रेमी र प्रेमिका अार्इ माग्थे उद्वाहको वर,
तथास्तु भन्दथ्याैं हामी हल्लार्इ पात पर्फर ।
धर्मात्मा एक अाएर बुझी हाम्रो मनस्थिति,
राम्रो लगन हेरेर तोके उद्वाहको मिति ।
शास्त्रीय विधिले हाम्रो भयो उद्वाह त्यो दिन,
अाधिकारिक प्रारम्भ भयो दाम्पत्य जीवन ।
गर्याैं नछुट्टिने वाचा हामीले जिन्दगी भर,
त्यसैले परसेवामा रहन्थ्याैं तित्य तत्पर ।
बाँधी लगनको गाँठो दुवै हामी वधू-वर
गर्दथ्यौं अरुकै काम निस्वार्थ भावले, तर ।
पक्षीहरू त्यहाँ आई बस्दथे संझिर्इ घर
भन्दथ्याैं यसबाहेक अर्को सत्कर्म के छ र !
त्यही भारी बिसाएर भरिया गीत गाउँथे,
उकालीको भुली पीर त्यहीँ कोही निदाउँथे ।
त्यहीं मालसिरी बोल्थे, असारे गाउँथे त्यहीं
हुन्थ्यो त्यहीं धान नाच, मारुनी नाच्दथे त्यहीं ।
त्यहीं बालुन दोहोरी साेरठी गाउँथे कुनै,
सँगिनी डडिंया फागु रोइला गाउँथे कुनै ।
गह्राैं ढाकर बोकेरै कोही गुनगुनाउँथे,
कुर्र कुर्र गरी कोही पक्षी भुर्र उडाउँथे
देहको पसिनालाई पङ्खा हम्की सुकाउँथ्याैं
बटुवाका व्यथा पीर हामी आफैं भगाउँथ्याैं ।
हाम्रो त्यो गुन संझेर ढोग्दथे भरिया जन
पर्वमा सब आएर गर्थे भजन कीर्तन ।
भरियाजनका सारा शीत-ताप भगाउँथ्याैं
माथ्लो बिसाउनी पुग्ने नयाँशक्ति जगाउँथ्याैं ।
आएपछि यहाँ, हाम्रो गाँठो लगनको छुट्यो,
हेर्न सम्म नि पाइन्न आशले जिन्दगी बित्यो ।
सधैं माइत संझेर रातमा अाँसु झार्दछाैं
दिउसाे त करैले नै हँसिलो मुख पार्दछाैं ।
प्रेमी र प्रेमिका छुट्टै राखिंदो रैछ जेलमा
त्यसै कारणले हामी पर्याैं आङ्गल खेलमा ।
सुनको पिंजडाभित्र थुनिएको सुगा भयौं,
मनभित्र रुँदै हामी सिङ्गो मुटु पगाल्दछाैं ।
नखार्इ सिकटे, दुब्लो, पातलो नै भए पनि,
नेपाली वनमा बस्नु सारै आनन्द हुन्छ नि !
लामो अायु नहोस् चाँडै छोडाैं यो देह भन्दछाैं,
नेपालमा पुनर्जन्म हुने ती दिन गन्दछाै ।
भन्दै गर्दा पिप्पलले, जाेडी बाँधेर लस्कर
खैरे र खैरेनी आए अोठ चुस्दै परस्पर ।
भनिन् पिप्पलले यो त यिनको सभ्यता अरे,
यो छाडा सभ्यता हेरी हामीले बाँच्नुपर्छ रे ।
यसबारे अरू केही भन्दछु सुन कोमल,
आप्रवासीहरू थुन्ने युएस्से जेल हो बुझ ।
ल्याइयाैं बलले हामी वनस्पतिहरू, तर
स्वेच्छाले खित्किंदै आए प्राध्यापक र डाक्टर ।
भूगर्भवेत्ता शिक्षाविद् अभियन्ता र चिन्तक,
अधिवक्ताहरू आए, आए विज्ञान-पण्डित ।
हातको फल त्यागेर उताको त्यो मनोहर,
यहाँ आई परे जेल, निस्किंदैनन् कठैबर !
जिन्दगीभरको जेल, जन्मन्छन् जेल-सन्तति,
पछिका जेल-पुस्ताले के जान्लान् देश,संस्कृति !
तर हामी भने लाखाैंलाख पुस्ता बिते पनि,
आफ्नो संस्कृति छाड्दैनाैं जेलैभित्रै सडे पनि ।
सोधें, उद्यानमा के के औषधीय वनस्पति
उताबाट यता ल्याए भनिद्यौ श्वास-दायिनी !
असुरो, अमला,बेल, गुर्जो र वर पिप्पल
धतुरो, कुरिलो, जाई, पारिजात र थाकल ।
हलेदो तुलसी, निम उन्यु, मोथे र कर्कलाे
सयपत्री, तितेपाती, घोडताप्रे तथा दुबो ।
नेपालका सबै प्राय वनस्पतिहरू यहाँ-
छन् सबै तिनको नाम आउँदैन दिमागमा ।
सुनी पिप्पलका वाक्य गरें पूर्वीय चिन्तन,
धन्यवाद दिएँ धेरै माइती म बनीकन ।
भने मनमनै तिम्रा आफ्ना आत्मीय पूजक
नेपालका सबैलाई भन्नेछु म गई अब ।
सम्भावना जेल छुट्ने भएनछ भने पनि,
पुनर्जन्म उतै हुन्छ तिम्राे हे स्वास्थ्य-दायिनी ।
यो सुनेपछि ती वृक्षबाट अाँसु झर्यो तल,
हर्षाश्रु संझिएँ, चित्त सारै गद्गद भो तब ।
घुम्दै जाँदा पूजनीय तुलसा जब देखियो,
बासिल नाम छेवैमा कसरी किन लेखियो ?
भन्ने सोच्दै थिएँ हेरी, आयो वासन मग्मगी
ठूली गरें, भने देवी ! सारै पवित्र छ्यौ तिमी !
देह मोटो थियो, मान-सम्मान शून्यमा थियो
भिडियो चित्र खिच्नेको त्यहाँ भिड ठूलो थियो ।
थिएन तुलसी मोठ न त पूजक नै थियो,
सबैका हातमा फोटो खिच्ने यन्त्र भने थियो ।
पिंजराको सुगाजस्तो नित्य नै थुनिए पनि,
गुणीको गुण जाँदैन वास्ना छर्छिन् सधै यिनी ।
हर्ष चिन्ता दुवै बोकी श्रद्धाले निहुरीकन
तलको श्लोक संझेर फर्क्याैं घर उसै दिन ।
छैनन् बान्धव, सम्मान-प्रेम हुन्न भने जहाँ
हुदैन बस्नु ज्ञानीले एकै रात पनि त्यहाँ ।
यस्मिन् देशे न सन्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः
एक रात्र्यावधिस्तत्र नवसेत् ज्ञानवान्नर ।
वानस्पतिक उद्यान, पिपल, तुलसी र म
अन्तर्व्यथा ः अाजकाे
December 22, 2015 komalprdकथा Leaveacomment
आज हर्केलाई पटक्कै निद्रा परेको छैन । रातभरि उसका मानसपटलभित्र विभिन्न तर्क वितर्कहरू चलिरहेका छन् । केही गर्दा पनि निद्रा नआएपछि उ जुरुक्क उठ्छ र भुइँमा बस्छ । उसलाई जन्माउने, दुःख गरेर हुर्काउने आमा र जन्मभूमिको संझना गर्छ । उसले आफ्ना बृद्ध बाको संझना गर्छ । संझदा संझदै ऊ पूर्व स्मृतिको महासागरमा चुर्लुम्म डुब्छ र केही बेरमा एकमुठी नुनिलो पानी सर्किएपछि ऐं ऐं गर्दै मनोवादको बाँकटेमा पौडिन थाल्छ ।
म एति टाढा यो बिरानु देशमा किन आएँ ! असी वर्ख नाघेका मेरा बाको अवस्था ऐले कस्तो होला ! अर्काको भनाइमा विश्वास गरी डलरको लोभमा पर्दा आज मेरो यो गति भो ! लोभले लाभ लाभले बिलाप भन्थे बुढापाकाले । मलाई लोभले लाभ हैन बिलाप मात्तै हात लागो ! अलिकति भा’को पाखो बारी पनि देउताजस्ता बालाई फस्ल्याङ् फुस्लुङ् पारी बेचेर बिदेशतिर टाप कस्ने म भन्दा पापी, दुष्ट छोरा सन्सारमा अर्को को होला ! हे भग्वान् मलाई केका दशाले याँ ल्याइ पुर्यायो नि ! एकछिन् रोएपछि हर्के पुनः बर्बराउन लाग्छ ।
विदेश पठाउने कम्पनीका पापी बज्ज्याले नक्कली भिसा दे’र मरेछ । तेसैले गर्दा तिन तिन बर्खसम्म लुकेर आफ्नु जिउज्यान नभनी अर्काकै कमारो भएँ । पैसा कमाउनु ता परै जाओस् ऐले झेलखानामा दुख् बेहोर्दै छु । एक बर्ख भैसको । था छैन अज्जै कति दिन थुन्ने हो । छोडिद्यो भने नि के गरी घर फिर्नु ! म पापी नि उस्तै छु । झेलखानमा परेछि मात्तै बालाई चिठी पठाएँ । बाले पाउनु भो भएन ! पा’को भा’ ता उताड नि चिठी आउनु पर्ने हो । कि……!
हर्केको कण्ठ एकाएक अवरुद्ध हुन्छ र भक्कानिएर डङ्ङ लड्छ र रुँदारुँदै झकाउँछ । टङ्टङ्… टङ्टङ्… टङ्टङ्…घन्टा घरले छ बजाए पछि ऊ झल्याँस्स हुन्छ, धर्खरिंदै उठ्छ र आप्mनो दुःख बिसाउन छेवैको कोठामा थुनिएको उसको साथी बजरङ्ग गुप्ताकोमा जान्छ ।
बजरङ्ग गुप्ता पनि हर्के जस्तै विदेशी मुद्रा कमाउन तिहाँ गएको जोगबनी बिहारको एउटा गरिब ठिटो हो ।
हर्केलाई देख्नासाथ केही मुस्कुराउँदै हर्केतिर हात बढाउँदै भन्छ, लेलो भैया आपका लेटर । अभि अभि मैने पोष्ट ओपिस से लेके आया हुँ ।
हर्के हर्ष र विस्मतको द्वन्द्वमा चिठी समात्छ । कता कता भित्र चस्स भएझैं हुन्छ उसको नेपाली मुटुमा ।
चिठीलाई तिन पल्ट ढोगेर विस्तारै नच्याती टिकट उक्काउँछ । सहिद धर्मभक्तको फोटो भएको टिकटलाई चुम्मा खाएर गोजीमा हाल्छ । खाम नच्यातिकन चिठी खोलेर उभिई उभिई पढ्छ ।
मिति २ हजार बाउन्न साल
मुंसिर दुइ गते सन्सरबार
पियारो छोरा हर्केकै, तेरो अभागी बाउको संजना र थुप्रै थुप्रै मायाँ । तैंले पठा’को चिठी बेलैमा हात परो । मेरै अभागले होला मैले बेलैमा चिठी लेखेर पठाउन सकिन । अब मात्तै अलेली चिठी लेख्न सक्ने भएँ हात काम्दै काम्दै । गल्ती भो भने सुधारी पड्नू ।
तँ याँबड हिंडेको निकोर्सी पल्टको कुरो हो माथि चुलीमा दुइ घरी कोला किनेर भारमा बोकी सुरुङ्गाको बुधबारे हाटमा बेच्न लाँदै थिएँ, माईको पुल नेर पुगेछि मलाई बसले किचेछ । होसाँ आउँदा म भद्रपुरको अस्पतालाँ सुतिर’को थे । मेरा दोडै खुट्टा भाँचिएछन् । अस्पतालाँ मेरो आफन्त भन्ने कोइ थे’न । मैले नचिन्या गोडा दुएक मान्छे अलिक पर्तिर एसो भन्दै थे — डाग्डर साप यो हर्के भन्ने मान्छेको दोडै गोडा काट्दिनु परो । बरु हजुर्लाइ……..। गाडी चल्ने ठाम्मा कोला बोकेर हिन्ने मोरो …..।… कच्च्याक हुनु पथ्र्यो ! बाँचेर हाम्लाई कम्ती दुख् देन ।
मेरो खुट्टा काट्नु पर्ने अवस्था थेन । खुट्टा नकाटिदिनोस् भनेर डग्डरसँग कति विन्ती भाउ गरेंं, रोएँ चिच्याएँ तर मेरो केइ लागेन । मलाई बिहोस पारेर मेरा दोडै खुट्टा काटेछन् ।
के गर्नु बाउ तँ याँ भएको भए मैले एसरी डुँडो भ’र बस्नु पर्ने थे’न होला । फेरि के भन्छस् र खुट्टा काटेको पर्सी पल्टै मलाई अस्पतालबड निकालो । तेस्तो अबस्थामा म कसरी घराँ आएँ होला तँ आफैं सम्जी त नानी । तेस्पछि दस मइनासम्म घाउ निको नभ’र धेरै दुख् पाएँ । स्वास्नी लाने जारले’नि एस्तो दुख् नपाओस् ।
धन्न डाँडाघरे बैदाङ काकाले अनेक जरीबुटी गरेर मेरो घाउ निको पारे । मेरा भाबी नै र’छन् । कइल्यै नबिर्सने गुन ला’का छन् उनले । तेसै गरी थुम्की गोठे जोगी साँइँलाले खान दे’र मेरो ज्यान बचाइ र’छ । फेरी लाउँदै दस घर चाहारेर चाँमल ले’र आउँछ । मलाई नि दिन्छ आफु नि खान्छ । अगिल्ला जनमको छोरै र’छ बरा ! उसको आफ्नु भन्ने कोइ छैन । पछि तैंले उस्को हेर्बिचार गर्नू ।
हेर् बाउ ऐले तँ के गर्दै छस्, के खाँदै छस् ! याँबड लग्या पैसा नि पुग्ने बित्तिकै सकिएछ । सात समुन्द्र पारीका मुलुकाँ तँलाई टिठ्याउने को पो होला र ! तेरो कथा बेथा सुनेर मेरो मुटुक ढुक्ढुक् ढुक्ढुक् गर्छ ।
मैले ता तँलाई पैले नै भन्या थें पैसा कमाउन विदेश जाइर’नु पर्दैन, आफ्नै मलुुकाँ नि उद्दिम गरो भने पैसा कमाइन्छ भनेर । तँ जत्ति नै पड्या लप्सीबोटे छ्याङ् कान्छाको छोरो जेठोले चार भन्ज्याङ् नेपालमैं टिपिसन हो कि के पढा’र मनग्गे कमाउँछ अरे । एइ गएको दशैंमा घर आँउँदा बाउलाई भेडी गोठालाले लाउने जस्तो तातो गन्जी, आमालाई ढाकाको चोलो र मुजेत्रो, बुइनीलाई इस्कुले डिरेस र मनग्गे दशै खर्च ले’र आयो अरे ।
गैरीघरे कालेले नि हुटेलमा पाले बसेर दशैंमा सए सातेक रुप्याँ ल्याएछ । सानामा तँसंगै गुच्चा खेल्ने घिम्रे पुरेतको छारो चिम्रे थे’न, हो त्यो पाँच बर्ष अगिसम्म जुँगे हल्दारका पछिपछि हिंडेर स्याइटेका भराँ जिउ पाल्थ्यो । ऐले त कोनि कुन पाटीको भोटाँ उठेर मान्ने भ’को छ अरे । तिस दिनमा तिसै हज्जार कमाउँछ अरे । सर्खारले गाडी नि दे’को छ भन्छन् । हुने बेलाँ गोरु नि ब्याउँछ भन्छन, हो र छ ।
तल्ला गाउँको तालु खुइले मुख्याको काइँली स्वास्नी पटिको छोरो लुइरे नेपाल खाल्डाभित्रैको एउडा दबाइ दोगानाँ नकुर बस्या थ्यो । तिन बर्खपछि डाग्डर भएछ । ऐले नेपालकै कोनि कुन सहराँ पैसा फ्याउरी ला’र बस्या छ अरे । ऐले उसलाई सप्पैले डाग्डर एल. भन्दारान् । खै के हो एल सेल भन्या म ता बुज्दा नि बुज्दिन ।
चार चोटि म्याटिस फिल भ’र रुँदै हिडेको भुँडे माजनको छोरो बिस्ने अइले अंगे्रजी इस्कुलाँ हाकिम छ अरे । बजाराँ चारतले सिमेन्टीको घर जखेछ तेल्ले नि ।
मैले तँलाई यिनेरु जस्तै हुनुपथ्र्याे भन्न खोज्या होइन । हाम्रै देशाँ नि गर्दा हुन्थ्यो भन्या हो ।
खोइ मलाइ ता एसपालिको दशैं नि आएन । दशैभरि तेरै बाटो हेरेर रोइबसें । अर्थोक् ता परै जाओस् बिरालोले खस्याक् गर्दा नि तेरै झझल्को लाग्छ । तेरो मुख माŒौ हेर्न पाए नि अलिक बर्ख बाँच्ने थें । एइ गएको असारमा चार कोरी दुइ टेकें । अब कति दिन पो बाँच्छु होला र !
सपनामा जइले नि तेरी आमालाई मात्तै देख्छु । हिजो छाडी अस्ति एउडा सारै पर्तङ्गे सपना देखें । मेरो घुँडाँ मुन्टो राखेर तेरी आमा रोई बस्या थी । दुई हात थापेर भन्दै थी, मैले तिम्लाइ जिम्मा दे’को मेरो मुटुक् काँ छ ? मलाई देऊ ।
म चुपो लागि बसें । केइ जुवाफ लाउन सकिन । एक न दुई भ’र घोसे मुन्टो लाइरएँ । खोइ मरेको मान्छेको हङ्सले नि छोराछोरी नबिर्सिंदो र’छ !
याँको हाल खबर केइ छैन भन्दा नि धेरै छन् । ऐले हाम्रा देसाँ पर्जातन्तर्को सारै जगजगी छ । मान्छेलाइ मात्तै होइन हावाजाज, मटर, भटभटे इत्येदि सप्पै थोक्लाइ पर्जातन्तरको मात लग्या छ । भर्खरै इन्डेबड आकासाँ उडेका दोडा हावाजाज अक्कासमै लाक्पा खेलेर भुइँमा पछारिएछन् र त्याँभित्र भा’को जात्रुहेरु सप्पै भुर्कुट् भ’छन् । तँजस्तै पैसा कमाउन बाइर ग’का धेरै नेपाली ज्वानहेरु मरेछन् ।
तल गोलधापे माइला मगरको छोरो बिर्खे पनि तेइ घटनामा परेछ । एउडा भा’को छोरो नि तेसरी मर्दा बिचरी आमालाइ कस्तो भा’होला ! छोराको पैसा खोइ कोनि कति लाख पाउँछ भनेर बिर्खेको आमालाइ इन्डेको दिल्ली बोलाएछ । तर अरु पैसा ता परै जाओस् फर्किने बाटो खर्च नि मरेर द्यो अरे । दिल्लीका सिल्ली बज्जेहेर्ले पैसा जति आपैंm हसुरेर दुख् मात्तै देछन् बबुरीलाइ ।
अर्को कुरा अइले याँ राम्रा मान्छे जति छानी छानी गाडीले किचेर मार्दैछ । उनन्चास साल माग तिन गते हाम्रा कमल सरको जेठो छोरो सुर्जेलाइ दमकको रतुवा पुलको छेवैमा बसले किचेर ठहरै मारो । ऊ सङ्गै उसको साथी कुमारलाइ नि ठहरै पारो । बिचरा सुर्जे छ्यालिस सालको आन्डोलनमा गोली खा’र नि बाँच्या थे । गर्नु गरो बज्याका ठाँडाले । तेरो कुरा गर्दा सर र सर्नी डाँकै छाडेर रुन्छन् । सर्नीले भनेको तँ र उनको सुर्जे एक दिनले मात्तै जेठाकान्छा अरे ।
अस्ति भर्खर मात्तै इटरी ओर्तिर सुकुना पुलैमा पान्जना इस्कुले नानीलाइ ठाँउको ठाउँ गाडीले कच्याक्कै पारेछ । कठैबरी एक्कै घर्का तिनजना पो परेछन् त ! तिँदेर्का बाउआमा अपहत्ते गरी मर्न आँट्या थे रे । तर गाउँलेले बँचाएछन् । च्च…च्च… कठैबरि… अब के गरी बाँच्नु तिनेर्ले ! एस्ता थुप्प्रै घटना भ’र दिनैपिच्छे जस्तो मान्छे मरिरन्छन् । लेखी साद्धै छैन ।
अँ तेताका नि धेरै नराम्रा कुरा सुन्दै छु । अर्काको मुलुक हो । बहुत होस् पु¥याउनू । नेपाल चारभन्ज्याङ् भित्रका एक जना मास्टरको तेतैतिर नकुर गर्दा मिसिनले दोडै हात छिनायो अरे । मेरा खुुट्टा छैनन् तेरो नि हात काट्यो भने पछि हाम्रो के गति होला !
अर्को कुरा रसुवा धुन्चेको रुन्चे भोटेले विदेशबड डलरसँगै एड्स् नि ल्यायो भनेर उल्लाइ सप्पैले गाली ग¥या सुन्छु । तँसँग तेस्तो एड्स्फेड्स् केइ छ भने कुनै हालतमा नि एता नल्याउनू । साँउँसम्म उठ्यो भने तेतै बेच्नू । बिकेन भने बरु तेसै भा’नि कसैलाइ दे’र आउनू । मान्छेले गाली दे’को राम्रो हैन ।
उइ तेरो अभागी बाउ
चिठी पडिसकेर राख्न लाग्दा खामभित्राबाट अर्को एउटा पट्याएको कागजको टुक्रा फुत्रुक्क भुइँमा खस्छ । हर्के निहुरिएर कागज टिप्छ । सेतो धागाले बाँधेको कागज देखेपछि लगलग काम्दै डोरी फुकाएर पढ्न थाल्छ ।
उपरान्त धेरै दिन अगिदेखुन् च्याङ्बा दाइ तँलाइ चिठी पठाउने कुरा गर्दै थे । बल्लतल्ल हिजो मात्र सुरुङ्गा बजार जाने गोरु गाडामा चडेर ढ्वाङ्मा चिठी खसाउन जाँदै थे । माइ किनारनेर पुगेछि उछिन्पाछिन् गर्दै कुद्ने दोडा बसले ठाउँको ठाउँ ठहरै मा¥यो । बिचरा ऐया भन्न नि पाएनन्.! खुट्टा भाँच्ने तेइ गाडी ज्यान लिने नि तेइ गाडी ! नेपालमा मान्छे जति गाडीले नै सक्ने भो भतिज ।
च्याङ्बा दाइ तँलाइ चिठी पठाउने घिड्घिडो पुरा नभै यो सन्सारबड बिदा भए । उनको आत्माले शान्ति पाओस् भनी उनका आप्mनै हातले लेख्या चिठी समेत पठाइद्या छु । मलाइ मेरा बाउ, आमा, सिरिमती मर्दा नि एस्तो पिर प¥या थे’न । हुनुहार् दैव नटार् भन्या एइ र’छ । अब जे हुनु भैगो । धेरै सुर्ता गर्दा नि दाइ आउँदैनन् । मलाइ नै आफ्नु बाउ सम्जेर तुरन् घर् फिर्नू । दाइको काज किरिया म गर्दैछु । पछि मेरो काम गर्ने तँ छँदैछस् । चिठी पाम्नासाथ त्याँ भात खा’र याँ चुठ्न आउनू ।
थुम्की गोठे जोगी काका
चिठी पढिसक्नासाथ हर्के थर्र काम्दै रुख ढलेझैं भुइँमा ढङ्ङ ढल्छ र भट्याक् भट्याक् गर्न थाल्छ । आत्तिएको रुन्चे स्वरमा हर्केलाई उठाउन खाज्दै बजरङग चिच्याउँछ हर्के भैया ……! ! !
स्मृतिमा पं.कृष्णप्रसाद मिश्र
June 14, 2015 komalprdसमालाेचना Leaveacomment
प्रेमलाल मिश्र र माता भागिरथा मिश्रका पुत्ररत्नका रूपमा वि.सं.१९८५ अाषाढ २५ गतेका शुभ दिनमा छातेढुङ्गा गाविस वडा नं.७ तेह्रथुममा जन्मनुभएका पण्डित कृष्णप्रसाद मिश्र एक ख्यातिप्राप्त विद्वान्का रूपमा प्रतिष्ठापित छन् । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसीबाट ज्याेतष तथा कर्मकाण्ड विषयमा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुका साथै अासाम संस्कृत शिक्षा बाेर्डबाट व्याकरण तथा पुराण विषयमा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण गरी दक्षता प्राप्त गर्नुभएकाे हाे । प्रतिभा र व्युत्पत्ति दुबै भएका मिश्र उत्कृष्ट कथावाचकका रूपमा परिचित छन् । जीवनकाे पूर्वार्धमा शिक्षा र समाज सेवामा समर्पित मिश्र जीवनकाे उत्तरार्ध प्रारम्भ सँगसँगै सक्रिय धार्मिक व्यक्तित्वका रूपमा प्रतिष्ठापित भए ।
अहिलेका तथाकथित व्यासाचार्य जस्ता नभएर वास्तवमै उत्कृष्ठ व्यासाचार्यका रूपमा अाफ्नाे प्रतिष्ठा काम गर्न सफल कृष्णप्रसाद मिश्रलार्इ कुनै विद्वान्ले पनि खाेट लाउन र सकेनन् र उछिन्न पनि ।
June 11, 2015 komalprdसमालाेचना Leaveacomment
स्वच्छन्दतावाद (Romanticism), अन्य नाम: (रोमान्टिक धारा, रोमान्टिकवाद, रोमान्टिक मान्यता, छायावाद) अठारौं शताब्दीतिर विकसित कलात्मक, साहित्यिक, र बौद्धिक आन्दोलन मानिन्छ ।
Romance शब्दको प्रयोग प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न अर्थमा गर्दै आएको पाइन्छ । प्रारम्भमा रोमेली भाषाहरूमा लेखिएका कृतिहरूलार्इ रोमान्स भानिन्थियो । यस्ता कृतिहरू हल्का, घटिया, असत्य र काल्पनिक हुन्थे । त्यसपछि प्रचीन फ्रान्सेली भाषामा romanz शब्दको प्रयोग पल्पित, असम्भव, वीरतापूर्ण, प्रेमविषयक उपन्यास वा कलाका लागि गर्न थालिएको देखिन्छ । सत्रौ शताब्दीको बेलायतमा पनि यसको प्रयोग कल्पनाप्रधान, हीन तथा असत्यकै सन्दर्भमा भएको पाइन्छ । अठारौ शताब्दीमा प्रथम पटक यसकाे अर्थ भावुकता, चारुत्व, रमणीयता, रोचकता तथा कल्पनाले युक्त रचनाहरूका लागि गरिएकाे देखिन्छ । स्वच्छन्दतावादका अनेक परिभाषा पाइन्छन् । तिनमध्ये केही परिभाषा यसप्रकार छन् :
१. अंग्रेजी साहित्यका आधुनिक इतिहासकार एमिल लेगुर्इ तथा कजामिया – ”परम्परावादी कलाका विरुद्ध नवान्मेषकारी सौन्दर्य शास्त्रीय सिद्धान्त नै स्वच्छन्दतावाद हो” ।
२. वाल्टरपेटर – ”अद्भूत र सुन्दरताकाे भव्य मिश्रण स्वच्छन्दतावाद हो” ।
३. एवरक्रम्बे – ”स्वच्छन्दतावाद भनेकाे बाह्य अनुभवबाट आन्तरिक अनुभूतितर्फको प्रयाण हो” ।
प्रवर्तन र विकास
स्वच्छदतावादमा जर्मन अात्मवादि तथा भाववादी दर्शनकाे गहिरा प्रभाव परेको देखिन्छ । यस दर्शनका प्रवर्तक हिगेल र सिलर मानिन्छन् । हिगेलका अनुसार साहित्य सिर्जनाको प्रक्रिया जडबाट चेतनतिरको यात्रा हो र चेतन वा बुद्धि अमूर्त, सार्वभौम, विशुद्ध र परम चैतन्यमय हुन्छ । हेगेलले स्वछन्दतालार्इ भौतिकवादमाथि आत्मवादको विजय मानेका छन् ।
स्वच्छन्दतावादमा फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९)काे पनि उत्तिकै गहिरो प्रभाव परेको छ । ज्याँ ज्याक रुसाेका विचारधाराले एकातिर क्रान्तिका लागि सहयाेगी वातावरण तयार पार्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकाे पाइन्छ भने अर्कातिर स्वच्छन्दतावादी सर्जकहरूलार्इ बाैद्धिक, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा प्रभाव पारेकाे देखिन्छ । अमेरिका र बेलायतमा यसकाे विकास तीव्र रूपमा भएकाे छ । बेलायतमा स्वच्छन्दतावादी कविहरूकाे दुर्इ पुस्ताले यस विचार धाराकाे संवर्द्धन गरेकाे देखिन्छ । पहिलाे पुस्ताका विलियम ब्लेक, विलियम वर्डस्वर्थ, कलरिज, समालाेचक चार्ल्स ल्याम्ब उपन्यासकार जेन अस्टिन, वाल्टर स्कट अादि र दाेस्राे पुस्ताका लर्ड वाइन, जर्ज गर्डन, म्यारी सेली|सेली, जाेन किट्स तथा गद्य लेखक विलियम ह्याज्लिट अादिकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाे छ ।
स्वच्छन्दतावाद मुख्य रूपमा सन् १७९८ बाट सुरु भर्इ सन् १८३० तिर समाप्त हुन पुगेकाे देखिन्छ । लगभग तिन दशककाे यसकाे समयावधिलार्इ निम्नलिखित दुर्इ चरणमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ
यस चरणलार्इ पूर्व स्वच्छन्दतावादी युग पनि भनिन्छ । अठाराैं शताब्दीकाे मध्यतिर अंग्रेजी कवितामा पूर्व स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति देखिएकाे मानिन्छ ।
यस अवधिका वर्न्स, पर्सी, वार्टन अादिका कवितामा पूर्व स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति देखिएकाे छ ।
साहित्यमा स्वच्छन्दतावादकाे खास प्रवर्तन ”’Lyrical Ballads”’ (१७९८) बाट सुरु भएकाे देखिन्छ । सन् १८०० मा प्रकाशित यसकाे भूमिकालार्इ स्वच्छन्दतावादकाे घाेषणा पत्र मानिन्छ । यस धाराकाे प्रतिनिधित्व बेलायतमा विलियम ब्लेक, वर्डस्वर्थ, कलरिज अादिले गरेकाे देखिन्छ भने अमेरिकामा राल्फ वाल्डाे, इमरसन, एडगर एलेन पाे अादिले गरेकाे पाइन्छ । त्यस्तै रुसमा अलेक्जेन्डर पुस्किन समेतले यस वादकाे प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यसरी हेर्दा पश्चिमी साहित्यमा स्वच्छन्दतावादकाे अधिक प्रभाव कवितामा परेकाे देखिन्छ ।
स्वच्छन्दतावादका प्रमुख मान्यतालार्इ माेटामाेटी रूपमा निम्नानुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ ः
१. वैयक्तिकता ः (स्वकाे अभिव्यञ्जना, व्यक्तिवादी काव्य चिन्तन, रचनामा निजी विषयवस्तुकाे अभिव्यक्ति) ।
२. काल्पनिकता ः (यथार्थ जगत्बाट पलायन, काल्पनिक जगत्काे विचरण, साैन्दर्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, प्रकृतिमा र्इश्वरीय सत्ताकाे अवलाेकन अादि) ।
३. विद्राेहात्मकता ः (अभिजात्य विषय, व्यक्ति परम्परा, शास्त्रीयता अादिकाे विराेध) ।
४. भावुकता ः (कृतिमा भावनाकाे प्रधानता) ।
५. अद्भूतता ः ( विशेष गरी कृतिमा प्राकृतिक अद्भूतताकाे चित्रण) ।
६. कृत्रिमताबाट मुक्ति ।
७. साङ्गीतिकता ।
८. मानवतावादी दृष्टिकाेण
नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादकाे प्रयाेग
नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराकाे प्रवेश वि.सं.१९९१ मा भएकाे हाे । रिष्कारवादकाे विपरित रूपमा अाएकाे याे प्रवृत्ति नेपाली साहित्यमा निकै झाङ्गिदै २०१६ सम्म कायम रहेकाे देखिन्छ । यसकाे प्रथम प्रयाेग नेपाली कविताबाट भएकाे पाइन्छ । यसका प्रथम प्रयाेक्ता लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटा हुन्, त्यसैले उनलार्इ नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराकाे प्रवर्तक मानिन्छ ।
यस प्रवृत्तिलार्इ अँगाली महाकाव्य, खण्डकाव्य, प्रगीतात्मक संरचनायुक्त काव्यकृतिहरू सिर्जना गर्नेहरूमा लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, युद्धप्रसाद मिश्र, गाेपालप्रसाद रिमाल, केदारमान व्यथित, हरिभक्त कटुवाल, अमरसिंह गिरी अादी कविहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।
साहित्यकाे गद्य विधातर्फ विशेष गरी अाख्यानमा स्वच्छन्दतावादले स्थान पाएकाे देखिन्छ । रूपनारायण सिंहकाे भ्रमर उपन्यास (१९९३) काे प्रकाशन पछि स्वच्छन्दतावाद एउटा मुख्य धाराका रूपमा देखा परेकाे हाे । यस प्रवृत्तिलार्इ अागाली उपन्यास तथा कथा लेख्ने अन्य लेखकहरूमा अच्छा रार्इ रसिक, शिवकुमार रार्इ, कृष्णसिंह माेक्तान, रवीन्द्र माेक्तान, भवानी भिक्षु अादि प्रमुख रूपमा रहेका खेखिन्छन् ।
परिष्कारवादी नियमकाे कठाेर बन्धनलार्इ पन्छाएर अघि बढेकाे स्वच्छन्दतावादी अवधिलार्इ नेपाली साहित्यकाे स्वर्णयुग मानिन्छ ।